Vakitaka fanaraha-maso fijerena laser - Laser volamena
Ny hafainganam-pandeha fanoherana haingam-pandeha ambony indrindra
Fahitana mikapoka milina fanendahana laser ho an'ny lamba fandroana
Amin'ny alàlan'ny teknolojia fanaraha-maso ny fahitana, ny fakantsary roa dia mandinika ny contours ary mamindra ny data manapaka mankany amin'ny laser mivantana. Io no fomba fanamorana mora indrindra ho an'ny fanontana fanaingoana ny loko. Betsaka ny safidy ao anaty fonosana rindrambaiko ho an'ny rindranasa sy takiana samihafa.
Misimisy kokoa momba ny vokatra
Loharano laser: CO2 laser fitaratra laser / CO2 RF metaly laser
Herin'ny Laser: 70 Watts / 100 Watts / 150 Watts
Faritra fiasana (W × L): 1600mm × 1300mm (62.9 "× 51")
Fandefasana fakantsary (W * L): 1600mm × 800mm (62.9 "× 31.4")
Software: Fampitaovana Volavolan-tsarimihetsika GoldenCAD
Latabatra miasa: Latabatra miasa conveyor
Hafainganam-pandeha ambony indrindra: 1 ~ 400mm / s
Famatsiam-pandrindrana avo lenta amin'ny alàlan'ny marika fisoratana anarana
Ny mpanapaka ny laser dia namboarina ho an'ny litera haingam-pandeha avo lenta, isa sy ny marika fametahana azy. Mampiasa marika fisoratana anarana ny , ary ny Software ao anaty milina dia manana fiasa fanavakavahana miovaova, izay mety hahafantatra ny drafitra mifanipaka amin'ny fitaovana famongorana ny dye.
Faritra fiasana (W × L): 1600mm × 1000mm (62.9 "× 39.3")
Fomba fankatoavana: Fanehoana fakan-tsary CCD
Tsy miankina mahaleo tena fahitana fahitalavitra Laser Cutting Series
Dingana fanapahana indram-loha miaraka amin'ny fakantsary
Ity cutter laser ity miaraka amin'ny fakantsary HD dia mety amin'ny fanapahana fehintsoratra mivantana. Miaraka amin'ny loha indroa, haingana ny haingam-pandeha, mampitombo ny fahombiazan'ny famokarana ary mahazo tombony bebe kokoa.
Nampiasaina tamin'ny akanjo vita pirinty, kiraro vita pirinty ambony, vamp manidina 3D manidina, takelaka amboradara, marika vita amin'ny lamba, faneva, indostrian'ny famoronana, sns.
Loharano laser: Laser fitaratra CO2
Herin'ny Laser: 130 Watts
Fihaonana Laser amin'ny endri-tariby manana endrika be dia be
Mamatotra milina fanendahana laser be dia be ho an'ny sora-baventy, grika, sonia malefaka
Ity cutter laser ity dia natao manokana ho an'ny indostrian'ny pirinty nomerika sy ny mpamatsy serivisy. Ny rafitra laser dia azo vokarina amin'ny sakany hatramin'ny 3.2 metatra ary ny halavany hatramin'ny 4 metatra.
Faritra fiasana (W × L): 3200mm × 4000mm (10.5 ft × 13.1ft)
Fandefasana fakantsary (W * L): 3200mm × 1000mm (10.5 ft × 3.2ft)
CCD Camera Laser Cutting Series
CCD Mamatsy milina fanaka fakan-tsary Camera
Io cutter laser io dia novolavolaina manokana ho an'ny fanapaka ny takelaka vita amin'ny marika, ravin-marika sy ny marika hoditra. Ny lohan'ny laser dia miaraka amin'ny fakantsary CCD mba hahatsapa ny fanekena otomatis sy ny fanesorana ny fakana sary.
Herin'ny Laser: 65W, 80W, 110W, 130W, 150W
Faritra fiasana (W × L): 900mm × 500mm / 1600mm × 1000mm / 300mm × 200mm
Latabatra miasa: Latabatra miasa amin'ny latabatra miasa / latabatra miasa